Tiles, akarongedzwa kana akaturikidzana windows mukati Windows 10, Emulator.online ▷ 🥇
Windows 10 inosanganisira nzira dzinoverengeka dzekuronga otomatiki windows yakavhurika, asi iwo akavanzika uye kunyangwe nekungodzvanya kamwe chete pabhara rebasa, kana isu tisingazive, tinogona kupedzisira tavakanganwa zvachose.
Semuenzaniso, kana uchifambisa hwindo kune rimwe divi, zvinokwanisika mataira windows nekukamura skrini mukati maviri kana kunyange mana (nekukwevera windows kumakona). Iwe unogona kuita zvakafanana nekudzvanya pane isina chinhu nzvimbo pabhara rebhatani nekona kiyi bhatani uye uchishandisa sarudzo Isa mahwindo padhuze nepadhuze.
Uchiri kudzvanya kurudyi mbeva bhatani, unogona kusarudza sarudzo ku ratidza mahwindo akaiswa mukati, iri imwe nzira yekuzviisa, kugovanisa iyo skrini zvakaenzana.
Nekhibhodi mapfupi, saka, unogona kudzvanya makiyi pamwechete Mahwindo + kumusoro kuti uwedzere hwindo, pinda kiyi yacho Windows + pasi museve kudzorera hwindo kune saizi yayo diki uye dzvanya makiyi zvakare Windows + pasi museve kudzikisira hwindo. pabharaki rebasa.
Nezvirongwa zvakaita sePowertoys zveWindows 10, zvinokwanisika kumisikidza mamwe mabasa akakosha, sekugadzira dhizaini hwindo, nekusarudza saizi uye chimiro chehwindo rega rega rakavhurika.
Isu tichiri kugona kuwana akawanda maatriums manomano ekuronga windows paWindows desktop.
Muchinyorwa chino tinowana chimwe chinonyanya kubatsira, chiri nyore kushandisa uye chinoita kuti desktop igare zvakanaka: mukana wekupaza windows, kuti ugone kuvhura kusvika gumi kana kupfuura zvakapararira pakombuta, uchiona zita ravo kuitira kuti ugone kuzviona. zvese pamwechete uye nekuzvisarudza nekukurumidza.
In Windows 10 unogona kudzvanya pabhara rebasa uye sarudza sarudzo "Inowirirana nemahwindo"kuisa mashegi baya mumwe wavo nekomboni yegonzo uye uunze hwindo kumberi Unogona zvakare kudzvanya icon yehama pane taskbar kuti uvaunze kumberi.
Pakangogadzirwa mapopoma, anogona kukanzurwa nekudzvanya bhatani repakona chairo pabhara rebasa nekusarudza sarudzo "Sunungura unowirirana nemawindows ese"Kubva kumenu
Ziva kuti kubvarura windows chimiro kwaive kwatove sarudzo muWindows 95, apo zviwanikwa zvemakomputa zvaive zvishoma uye chisarudzo chakaderera. Aya maitiro ekuona akafanana chaizvo neakawanikwa, kusvika nguva pfupi yadarika, nekutsikirira makiyi eWindows-Tab panguva imwechete (nhasi muWindows 10 zvinoonekwa zvinoitwa).